အသေးစား Compact PSA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ China Manufacturer
Hunan Eter Electronic Medical Project Stock Co., Ltd. [Hunan,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Middle East ထုတ်ကုန်:11% - 20% Cert:ISO13485, ISO9001, OHSAS18001, ASME, CE ဖေါ်ပြချက်:သေးငယ်တဲ့ Compact အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ,Compact PSA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ,O2 Generator အောက်စီဂျင်
Home > ထုတ်ကုန်များ > အောက်စီဂျင် Generator ကို > Containerized အောက်ဆီဂျင် Generator ကို > အသေးစား Compact PSA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ
PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR ဆေးဘက် PSA Compact အောက်စီဂျင်မီးစက်ချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက်≥90% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သမားရိုးကျ Bulk အရည်အောက်စီဂျင်နှင့်ဆလင်ဒါအောက်စီဂျင်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ETR ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PSA ကျစ်လစ်သောအောက်စီဂျင်မီးစက်သည်ကုန်ကျစရိတ်ကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချနိုင်သည်။ သူတို့ကအကွာအဝေး၊ တည်နေရာနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကန့်အသတ်များကိုကျော်လွှားပြီးသင်၏ဆန္ဒဖြင့်အောက်စီဂျင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်
အသေးစားကျစ်လစ်သိပ်သည်း PSA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံအသုံးပြုခြင်း -
အလတ်စား, အသေးစားဆေးရုံများ, ဆေးခန်း။
အသေးစား Compact PSA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံအလုပ်ရုံ:
အသေးစား Compact PSA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ရွေးချယ်မှုရွေးချယ်မှု:
အသေးစား Compact PSA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံအင်္ဂါရပ်များ
၁) တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှု - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်မီးစက်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံရှိပြီး ETR ၏ Compact Oxygen Generator ၏မူပိုင်အပူလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်ရေနုတ်မြောင်းစနစ်သည်သက်တမ်းရှည်စေနိုင်သည်။
၂။ အဆင်ပြေလွယ်ကူခြင်း - ဆေးရုံငယ်များရှိဆေးခန်းများရှိအောက်စီဂျင်သုံးစွဲမှုပမာဏအရအောက်စီဂျင်ကိုအောက်ပါအတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထည့်နိုင်သည်။
၃) အသိဉာဏ်နှင့်လွယ်ကူသည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း - မြင့်မားသောအသိဥာဏ်ရှိသောအလိုအလျောက်လည်ပတ်မှု၊ ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစစ်ဆင်ရေး; အဝေးမှစစ်ဆေးခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
၄။ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းဒီဇိုင်း - လေကိုကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးစွမ်းအင်ကိုသာသုံးစွဲပါ။ အောက်ဆီဂျင်စားသုံးနိုင်သောပမာဏကိုဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့်အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်ပြီးပါဝါကိုများစွာသိမ်းဆည်းထားသည်။
(၅) Multiple Functions: Controller သည်အောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုစတင် / ရပ်တန့်စေနိုင်ပြီးအောက်စီဂျင်စီးဆင်းမှု၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု၊ စိုထိုင်းဆကိုညှိနိုင်သည်။
၆။ နိုက်ထရိုဂျင်ကုန်ထုတ်ဒီဇိုင်း - နိုက်ထရိုဂျင်အိပ်ဇောဒီဇိုင်းသည်အခန်းအတွင်းရှိနိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးအောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။
၇။ အဆင်ပြေစွာတပ်ဆင်ခြင်း - ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးနှင့်ပေါင်းစပ်ထားခြင်း၊ ၀ င်းဒိုးတပ်ဆင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် run ရန်မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောအသေးစားကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော PSA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံကိုထုတ်လုပ်သည်။
2. အသေးစား Compact PSA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဘယျမှာရ?
က။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး --- ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိုအပ်ချက်များကိုအားလုံးပေး။
ခ။ ဈေးနှုန်း --- ရှင်းလင်းသောအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်အတူတရားဝင်ကိုးကားပုံစံ။
ဂ။ ဖိုင်၊ PDF၊ Ai၊ CDR၊ PSD တို့ကိုပုံနှိပ်။ ဓာတ်ပုံ resolution သည်အနည်းဆုံး 300 dpi ရှိရမည်။
။ စာချုပ်အတည်ပြုခြင်း --- မှန်ကန်သောစာချုပ်အသေးစိတ်ကိုပေးပါ။
င။ ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ --- Negotiable ။
ဆ။ သင်္ဘောဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပင်လယ်၊ လေယာဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အထုပ်၏အသေးစိတ်ပုံကိုပေးလိမ့်မည်။
T / T, L / C စသည်တို့
4. အသေးစား Compact PSA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ၏ချက်ချင်းကိုးကားရဖို့ကိုဘယ်လို?
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုစုံစမ်းရေးပေးပို့သည့်အခါ, pls ကြင်နာစွာအောက်ဖော်ပြပါနည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပေးပို့ပါ။
၁) O2 စီးဆင်းနှုန်း - _____ Nm3 / hr (သို့မဟုတ်တစ်နေ့လျှင်ဆလင်ဒါမည်မျှဖြည့်လိုသည် (၂၄ နာရီ))
၂) O2 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု _____%
4) ဗို့အားနှင့်ကြိမ်နှုန်း: ______ V / PH / HZ
၆။ စီမံကိန်းတည်နေရာ -
သေးငယ်တဲ့ Compact အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ Compact PSA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ O2 Generator အောက်စီဂျင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compacted အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ ဆေးရုံများအတွက်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ ဆေးရုံအတွက်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက် အသေးစားအောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်စက်ရုံ